Suzuki Myanmar Considering Shift to CKD | Myanmar Business Today
HomeBusinessLocalSuzuki Myanmar Considering Shift to CKD
Myanmar’s car market is booming. Even as demand for used cars continues to grow, new showrooms for brand-new cars are opening for business and motor expos are held frequently to showcase new models. The government’s new vehicle ownership policy has stirred up the used-car market but has had no effect on the market for brand-new cars.
There are advantages to buyingabrand-new car. In addition to guaranteed ownership, buyers can take advantage of the instalment payment option offered by automakers and distributors in partnership with local banks. Little wonder, then, that customer interest in brand-new cars is on the rise.
Three years ago, Myanmar people first became familiar with installment payment plans, which allow consumers to buy cars more easily. Taxi drivers, for instance, are now able to own their own vehicle after saving enough money foradown payment.
Initially, the down payment was 30 percent of the car price. Now, it has been reduced to 10 or 20 percent onapayment plan of up to seven years.
Myanmar Business Today recently sat down with Mr. Keeichi Asano, Managing Director of Suzuki Thilawa Motor and Suzuki (Myanmar) Motor, to talk about the local auto market. His companies operate manufacturing plants and directly sell cars to customers across Myanmar. Recently, Suzuki (Myanmar) Motor partnered with CB Bank to offer CB-Suzuki Easy Finance.
‘‘We are doing this type of partnership to enable Myanmar people to buyacar by payingafew percentage of the car” upfront, Mr. Asano explained.
Suzuki, which controls over 50 percent of the local market, has also partnered with another local bank, AYA Bank. The company delivered 4,000 units to customers in 2016, 8,000 in 2017 and 17,500 in 2018 and expects to sell over 20,000 cars this year.
“As we produce Carry trucks as well as individual-use cars, most of our customers are owners of small and medium enterprises,” said Mr. Asano. “We focus on the supply of spare parts to better ourselves inacompetition for market share, so that our customers can easily buy spare parts in case of any damage. On other issues, there are no big differences between us and our competitors.”
In addition to producing more spare parts and opening more service centers, the company also seeks to produce new model lineups to satisfy customers’ needs.
All foreign carmakers in Myanmar produce cars under the SKD (Semi Knocked Down) system, which requires onlyasmall number of workers as all the parts are imported. In contrast, the CKD (Completely Knocked Down) system can potentially create many more jobs, as all the parts have to be produced locally. Currently, nine companies are producing vehicles under the SKD system in Myanmar and seven others are expected to join them. While the Ministry of Industry encouragesashift to the CKD system, it has acknowledged that suchashift is not yet possible. The country still lacks the necessary infrastructure and manpower for engine production and switching to the CKD system will require vast amounts of investment.
Regardingashift to the CKD system, Mr. Asano said, “We are considering it and it will come into action soon, but we cannot yet say when. Anyway, the CKD system will benefit the countryalot.”
When the number of Suzuki customers grows large enough, the company will start producing car bodies and other parts under the CKD system at Thilawa Special Economic Zone, said Mr. Asano.
Suzuki entered Myanmar in 1998. The following year it started producing automobiles and motorbikes at its plant in Yangon’s South Dagon Industrial Zone in partnership with the Myanmar government.
The company has invested $60 million in its South Dagon plant and spent another $35 million onanew plant in Thilawa Special Economic Zone. The Thilawa plant, launched in 2018, is producing 48 units per day. In 2018, Suzuki delivered 17,500 units in Myanmar and 3.3 million units globally. Myanmar sales exceeded target, encouraging the company to pursue increased production.
Japan-based Suzuki Motor Corp. operates 35 plants in 21 countries, producing motorbikes, automobiles and outboard engines.
Suzuki (Myanmar) Motors Co.,Ltd နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း
တစ်ပတ်ရစ်ကားအရောင်းအဝယ်ဈေးကွက်သည် လက်ရှိအချိန်ထိအားကောင်းနေသေးသည့် အခြေအနေတွင်ရှိသကဲ့သို့ Brand New ကားအရောင်းပြခန်းများ ၊ ပြပွဲများကလည်း နောက်ပိုင်းနှစ်များ အတွင်း ပိုတိုးလာသည်။ ကားမော်ဒယ်တစ်ခုနှင့်တစ်ခု အပြိုင် ကားမော်ဒယ် သစ်များကို မိတ်ဆက်လာကြသည်။ စည်းကြပ်းခွန်မှလွတ်ကင်းနေပြီး ပိုင်ရှင်အမည် ပေါက်မရှိသည့် ကားများအမည်ပေါက် ပြောင်းရမည်ဆိုသည့် ကိစ္စရပ်ကြောင့် တစ်ပတ်ရစ်ကားဈေးကွက်အတွင်း လတ်တလော အသံကျယ်နေကြသော်လည်း Brand New ကားမော်ဒယ် အသစ်များအရောင်းမြှင့်တင်ပွဲများအတွက်တော့ သက်ရောက်မှှုအနည်းအကျဉ်းမျှပင်မရှိခဲ့ပေ။ လစဉ်ဝင်ငွေပေါ်တွက်ချက်ကာ ပိုင်ရှင်အမည်ပေါက်ရရှိခြင်းနှင့် နှစ်ရှည်အရစ်ကျရောင်းချပေးသည့်စနစ်များကြောင့် Brand New ကားများကို စိတ်ဝင်စားမှှုက မြင့်တက်လာသည်။ ပြည်တွင်းဘဏ်များကလည်း တခြားနိုင်ငံများတွင်ကျင့်သုံးသည့်နည်းလမ်းများအတိုင်း ယင်းကဲ့သို့ အရစ်ကျ ကား၊ အိမ်ရာ ၊တိုက်ခန်း ရောင်းချသည့်အစီအစဉ်များကို ပူးပေါင်းပါဝင်ကြသည်။
ပြည်တွင်းတွင်ထုတ်လုပ်သည့် ကားစက်ရုံများကလည်း ပြည်ပမှတင်သွင်းလာသည့် ကားအသစ်များနည်းတူ ဘဏ်များနှင့် ချိတ်ဆက်၍ အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်သည့်စနစ်ကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လာကြသည်။
အရစ်ကျကားရောင်းချသည့်အစီအစဉ်များကို လွန်ခဲ့သည့် သုံးနှစ်ခန့်မှစတင်၍ လူထုကထိတွေ့လာခဲ့ပြီး ပုံမှန် Taxi Owner ကြေးပေးမောင်းသည့် အငှားယာဉ်မောင်းအချို့လည်း တတ်နိုင်သလောက် စုဆောင်း ငွေသွင်းကာ ကားပိုင်သည့်အခြေအနေများရှိလာကြသည်။
မော်တော်ယာဉ်များကို အရစ်ကျစနစ် စတင်လာသည့်အချိန်တွင် ကနဦးပေးသွင်းငွေကို ကားတန်ဖိုး၏ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းဟု သတ်မှတ်ခဲ့သော်လည်း ယခုအခါတွင် ကားတန်ဖိုး၏ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း ၊ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိသာ ပေးသွင်းရုံဖြင့် ၇နှစ်အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ကားဝယ်ယူလာနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ မြန်မာပြည်မှာစက်ရုံလာဖွင့်ပြီးအရစ်ကျစနစ်ဖြင့်ပါ ကားမော်ဒယ်မျိုးစုံကို တိုက်ရိုက်ရောင်းချနေသည့် Suzuki (Myanmar) Motors Co.,Ltd နှင့် Myanmar Business Today ကလည်း လတ်တလောစက်ရုံထုတ်ကားများအကြောင်းကို တွေ့ဆုံပြီး မေးမြန်းခဲ့သည်။
နိုဝင်ဘာလ ၇ ရက်က CB Bank နှင့် Suzuki Myanmarတို့ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်သည့် CB-Suzuki Easy Finance မိတ်ဆက်ပွဲတွင် Suzuki (Myanmar) Motor Co., Ldtနှင့် Suzuki Thilawa Motor Co., Ltdတို့မှ မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ Mr. Keiichi Asano နှင့် မေးမြန်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“ပြည်သူတွေအနေနဲ့ ဘဏ်တွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး ကားတန်ဖိုးရဲ့ ရာခိုင်နှုန်းအနည်းငယ်ကို ပေးသွင်းပြီး နှစ်ရှည်စနစ်ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်ဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အခုလိုမျိုး ဘဏ်တွေနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဆောင်တာပါ” ဟု Mr. Keiichi Asano က ၎င်းက အဆိုပါနေ့ပွဲအခမ်းအနားနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပြောပြသည်။
လက်ရှိတွင် ဆူဇူကီးမှာ အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ရောင်းချနိုင်ရန် ဘဏ်နှစ်ခုဖြစ်သည့် ဧရာဝတီဘဏ်၊ CBဘဏ်တို့နှင့် ချိတ်ဆက်ကာ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိခြင်းဖြစ်သည်။
Suzuki အနေဖြင့် ကားအသစ်ဈေးကွက်၏ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ၎င်းတို့၏ အဓိက ဝယ်ယူသူများမှာ SME လုပ်ငန်းရှင်အများစုဖြစ်သည်။ Suzukiကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ၂၀၁၆ခုနှစ်တွင် ယာဉ်အစီးရေ ၄၀၀၀၊ ၂၀၁၇ခုနှစ်တွင် ယာဉ်အစီးရေ ၈၀၀၀၊ ၂၀၁၈ခုနှစ်တွင် ယာဉ်အစီးရေ ၁၇၅၀၀ ရောင်းချနိုင်ခဲ့ပြီး ယခုနှစ်တွင်လည်း ယာဉ်အစီးရေ ၂၀၀၀၀ကျော်အထိ ရောင်းချနိုင်ရန် မျှော်မှန်းထားသည်။
“ကျွန်တော်တို့က အိမ်စီးကားများအပြင် လုပ်ငန်းသုံး Carry Truckကားတွေကို ထုတ်လုပ်တဲ့အတွက် အသေးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အများစုက ဝယ်ယူတယ်။ ဈေးကွက်ယှဉ်ပြိုင်တဲ့အခါမှာလည်း တခြားဟာတွေထက် ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီက အပိုပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုကို အဓိကထားပြီးထုတ်လုပ်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ကားကို ဝယ်ယူမယ်ဆိုရင် တစ်စုံတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ရင် ယာဉ်အပိုပစ္စည်းကို အလွယ်တကူ ဝယ်ယူနိုင်အောင် အပိုပစ္စည်းကို အဓိကထားပြီးထုတ်လုပ်တယ်။ ကျန်တဲ့အပိုင်းကတော့ သိပ်ကွာခြားမှုမရှိတဲ့အတွက် အားသာချက်အားနည်းချက်မရှိပါဘူး” ဟု Mr. Keiichi Asano က ဈေးကွက်ယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းပြခဲ့သည်။
ပြည်တွင်းစက်ရုံများ ပြည်ပနိုင်ငံများမှ ထုတ်လုပ် တင်သွင်းလာသည့် ကားများကို ဈေးကွက်အတွင်း ပိုမိုရောင်းချနိုင်ရန် ဘဏ်များနှင့် ချိတ်ဆက်ကာ အရစ်ကျဖြင့် ရောင်းချရသည့်စနစ်ကို ကားဈေးကွက်တွင် ယှဉ်ပြိုင်နေရသည့်အပြင် အခြားတစ်ဖက်တွင်လည်း ယာဉ်အပိုပစ္စည်း ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ကား Service Centre များ ပိုမိုဖွင့်လှစ်နိုင်ရန် လုပ်ဆောင်ခြင်းများအပြင် ဝယ်ယူသူအကြိုက် ကားပုံစံသစ်များကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ထုတ်လုပ်နိုင်ရန် စီစဉ်လျက်ရှိသည်ဟု သိရသည်။
ပြည်တွင်း၌ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပြုလုပ်လာကြသည့် ကုမ္ပဏီများသည် ကားထုတ်လုပ်ရာတွင် SKD စနစ်ဖြင့်သာ ထုတ်လုပ်ကြပြီး CKDစနစ်ဖြင့် ထုတ်လုပ်သည့် ကုမ္ပဏီမှာ ယနေ့အချိန်အထိ ပြည်တွင်းတွင် မရှိပေ။
SKD စနစ်ဖြင့် ထုတ်လုပ်သည့်အတွက် ပြည်ပမှ တင်သွင်းလာသည့် ကားကိုယ်ထည် အစိတ်အပိုင်းများကို ပြည်တွင်းတွင် ပြန်လည်တပ်ဆင်ရပြီး ယင်းလုပ်ငန်းအတွက် အလုပ်သမားအနည်းငယ်သာ လိုအပ်လျက်ရှိသည်။
CKD စနစ်ဖြင့် ကားများကို ထုတ်လုပ်မည်ဆိုပါက ပြည်တွင်းတွင် ကားအစိတ်အပိုင်းအားလုံးကို ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ တပ်ဆင်ခြင်းများကို ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်သည့်အတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများစွာ ရရှိလာမည်ဖြစ်သည်။လက်ရှိတွင် SKD စနစ်ဖြင့်ကား ထုတ်လုပ်နေသည့်ကုမ္ပဏီကိုးခုခန့်ရှိပြီး ထုတ်လုပ်ရန်မျှော်မှန်းထားသည့် ကုမ္ပဏီ ၇ ခုခန့်ရှိသည်။ စက်မှှုဝန်ကြီးဌာနကလည်း ကားထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ CKD စနစ်ပြောင်းလဲထုတ်လုပ်နိုင်ရေး အားပေးသော်လည်း လတ်တလောတွင်မဖြစ်နိုင်သေးသည့်အကြောင်းရှင်းပြဖူးသည်။ အဓိကအချက်အနေဖြင့် မော်တော်ယာဉ်အင်ဂျင်စက်များပြည်တွင်းတွင် မထုတ်နိုင်သေးခြင်းနှင့် ဒီဇိုင်းမိုမျိုးစုံသုံးကာ အလုံးစုံကားထုတ်လုပ်ရေးအတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှှုများခြင်းကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
CKD စနစ်ဖြင့် မော်တော်ယာဉ်များ ထုတ်လုပ်ရန် အစီအစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ Suzuki (Myanmar) Motor Co., Ldtနှင့် Suzuki Thilawa Motor Co., Ltd တို့မှ မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ Mr. Keiichi Asano ကို မေးမြန်းရာ “ ပြည်တွင်းမှာ CKD စနစ်ကို ပြောင်းလဲလုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့အတွက် စဉ်းစားနေတာတွေရှိပါတယ်။ မကြာခင်လုပ်ဆောင်သွားမှာပါ။ အချိန်အားဖြင့် ဘယ်တော့စတင်ဆောင်ရွက်နိုင်မလဲဆိုတာကိုတော့ အတိအကျ မပြောနိုင်သေးပါဘူး။ ဒီစနစ်သာ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ တိုင်းပြည်အတွက်လည်း များစွာ အကျိုးရှိလာနိုင်မှာပါ” ဟု ပြောသည်။
ဆူဇူကီးကားများကို ပြည်တွင်း၌ ဝယ်ယူအသုံးပြုသူ များပြားလာပါက ဂျပန်နိုင်ငံမှ တင်သွင်းသောကားကိုယ်ထည်နှင့် ကားအစိတ်အပိုင်းများကို သီလဝါအထူးစီးပွားရေးစက်မှုဇုန်တွင် CKD စနစ်ဖြင့် ထုတ်လုပ်၍ ရောင်းချနိုင်ရန် လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။
Suzuki ကုမ္ပဏီသည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ ၁၉၉၈ခုနှစ်မှ စတင်၍ ဝင်ရောက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ပြည်တွင်းသို့ ဝင်ရောက်လာချိန်မှစတင်၍ ၁၉၉၉ခုနှစ်တွင် မြန်မာအစိုးရနှင့်ပူးပေါင်းကာ ရန်ကုန်မြို့ရှိ တောင်ဒဂုံစက်မှုဇုန်တွင် မော်တော်ယာဉ်များနှင့် မော်တော်ဆိုင်ကယ်များကို စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
တောင်ဒဂုံစက်မှုဇုန်တွင် တည်ရှိသည့် Suzukiကား ထုတ်လုပ်သည့် စက်ရုံအတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း၆၀ကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားပြီး သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်တွင် လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေသည့် ကားထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံအတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၅ မီလီယံကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသည်။
၂၀၁၈ခုနှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် စတင်တည်လည်ပတ်ခဲ့သည့် သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်ရှိ Suzuki ကားထုတ်လုပ်သည့် စက်ရုံမှ တစ်ရက်လျှင် ယာဉ်အစီးရေ ၄၈စီး ထုတ်လုပ်လျက်ရှိကာ ပြည်တွင်းဈေးကွက်သို့ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချလျက်ရှိသည်။၂၀၁၈ခုနှစ်အတွင်း ပြည်တွင်းဈေးကွက်၌ ဆူဇူးကီးမှ ယာဉ်အစီးရေ တစ်သောင်းကျော်ကို ရောင်းချခဲ့ပြီး တစ်ကမ္ဘာလုံးအနေဖြင့် မော်တော်ယာဉ်အစီးရေ ၃၃၀၀၀၀၀ကျော်ကို ထုတ်လုပ်ရောင်းချနိုင်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ ရောင်းချခဲ့သည့် ပမာဏမှာ ရောင်းချရန်လျာထားသည့် အရေအတွက်ထက် ကျော်လွန်ရောင်းချနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ပြည်တွင်း၌ မော်တော်ကား တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်မှုကိုလည်း ပိုမိုထုတ်လုပ်နိုင်ရန် လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ဆူဇူကီးမော်တော်ကော်ပိုရေးရှင်းသည် နိုင်ငံပေါင်း(၂၁)နိုင်ငံတွင် ဆိုင်ကယ်၊ မော်တော်ကားနှင့် ပဲ့ချိတ်အင်ဂျင်များ ထုတ်လုပ်သည့် စက်ရုံပေါင်း(၃၅)ခုရှိထားပြီးဖြစ်သည်။
Previous articleWould You Like Fries With That? McDonald’s Already Knows the Answer.
Next articleWeight-Loss Surgery for Teens Who Can’t Lose Weight Any Other Way